Ungazizinzisa njani njengoMmeli weeNtengiso yePropathi: -Ibhlog yeNdawo ethengisa izindlu nomhlaba:
EyeDwarha 12, 2017 by UAlice Porter, Iimbono zizonke:
Siphila kwihlabathi elinabantu abaninzi, sabelana ngeengcinga ezifanayo nezethu, ukuba ngokuqinisekileyo kunokwenzeka ukuba abantu bakhuphisana abathengi kunye nabaxumi. Oku kunjalo nakubantu abakumhlaba wepropathi. Zininzi kakhulu iiarhente zabucala ezininzi kunye neenkampani ezinkulu ezinikezelwe kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, kangangokuba abantu abakwisikhundla apho banexesha elinzima lokuzisungula kwaye bafumane iinkonzo zabo zaziwa kubaxumi abanokubakho. Nazi ezinye zeengcebiso ezilungileyo ukuziseka njengearhente yearhente yokuthengiswa kwezindlu…
Uthungelwano yindlela entle yokuseka uhlobo lwakho, kwaye ukhumbule, ayisiyiyo into oyaziyo, kodwa ngubani owaziyo kwishishini lokuthengisa izindlu nomhlaba. Ukuba uxubha ngamagxa abanye abantu kweli shishini okanye unokuba nabanini bamakhaya uya kufumanisa ukuba uyakucetyiswa ngabo okanye uza kuthengisa kunye nabo. Uthungelwano sisixhobo esibalulekileyo ngaphandle kokukwenza ushishino, kuba lunceda ukuphucula izakhono zabantu bakho. Oku kuluncedo kakhulu kubantu abakwishishini lokuthengiswa kwezindlu, njengoko ukunxibelelana nabantu yinxalenye ephambili yomsebenzi.
Ukuseta iwebhusayithi kukuvulela i-host yonke yabathengi abatsha abanokubakho. Le yindawo entle yokwazisa ngepropathi oyimeleyo kwaye iya kukunceda nasekusekeni uthungelwano olukhulu.
Iindlela zokuthengisa zakwantu:
Iindlela zentengiso zesiko zibalulekile kushishino lokuthengisa izindlu, nantoni na ebonakalayo iya kunceda abantu bakhumbule igama lakho, uphawu kwaye oko kuyakubanceda ukuba baqonde ngcono ngento oyithengisayo okanye uyiqeshisayo. Ezinye zeendlela ezilungileyo zokwenza ukuba abantu bathethe ngawe kukunika ukuthengisa, umzekelo iiwristband zomthendeleko, iimeyile, iipensile, iisheti kunye nezitikha. Nantoni na onokumnika yona enegama lophawu okanye uphawu kuyo iya kubeka umda ngokuthe ngqo kubakhuphiswano bakho.
UAlice Porter Oktobha 12, 2017
Julayi 23, 2018 Inzuzo kunye ne-Cons of Use floor Plans kwii-Real Estate Ngelixa ithiyori isicwangciso somgangatho songeza ixabiso kulo naluphi na uluhlu lwepropathi, ukujonga okwenyani kubonisa ukuba kuphelaipesenti ezincinci kuluhlu lweepropathi zorhwebo zibandakanya iiplani zomgangatho. Izicwangciso zomgangatho azisetyenziswanga kuba ukuthengisa okanye ukurentisa iipropathi kusebenza ngendlela eqhelekileyo ngaphandle kwabo, kwaye ke iindleko kunye nomzamo wokuzivelisa awubonwa njengeyomfuneko. Nangona kunjalo, njengoko inkqubo yentengiso iba yidijithali, isicwangciso somgangatho sisixhobo sokufumana utyelelo olungakumbi. Ngaba elinye icala lichanekile okanye ngaba izicwangciso zomgangatho zingaphezulu kwe […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi
Oktobha 13, 2016 Ukuthengiswa kwezindlu nomhlaba eIndiya kuPhuculo lweZiseko zoLwakhiwo Ukuziphatha kwi-real estate kubalulekile ukulandela njengoko zibonelela ngefestile yamathuba kuye wonk 'ubani onxulumene nayo. Nokuba ngaba ngumvelisi okanye umthengi, bobabini baxhomekeke ekuveliseni ishishini lokwenyani ukuze baxhamle ngalo. Ukuthengiswa kwezindlu kunye nokuthengiswa kwezindlu eIndiya kushishino oluyinkimbinkimbi njengoko ibikumgama we-roller coaster ukusuka kwiminyaka embalwa edlulileyo. Kwakuninzi emva kowama-2010 xa imeko yayisingathwa ngobuchule yimibutho karhulumente ebizama ukumisela imigaqo […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi